काठमाडौं १ का युवा उम्मेदवार अनिल शर्मा को हुन् ? - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौं १ का युवा उम्मेदवार अनिल शर्मा को हुन् ?
काठमाडौं, कात्तिक २४ । यतिबेला नेपाली राजनीतिमा पैसा र शक्तिका आधारमा नेताहरुलाई ठूलो र सानो भनेर उपमा दिइन्छ । वा कुन व्यक्ति कसको पुच्छर हो त्यही अनुसार उसको राजनीतिक हैसियत तोकिएन्छ । उसको आफ्नो सामाथ्र्य वा भिजनका आधारमा नभइृ पहुँचका आधारमा नेता चुनिन्छ । र त्यसैगरि प्रचार पनि गरिन्छ ।
तर राजनीतिभित्रको सत्यता खोतल्ने हो भने साना भनेर हेपिएका राजनीतिक कार्यकर्ताभित्रको आर्दश, इमानदारी र क्षमता ठूला–ठूला भनिएको नेताहरु भन्दा धेरै गुणा बढी र अगाडि हुन्छ । त्यसैमध्येका एक हुन् काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ का वाम गठबन्धनका प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार युवा अनिल शर्मा ।
काँग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह, विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रबिन्द्र मिश्र, नेपाली कांग्रेस विपीका नेता हरिबोल भट्टराई र नयाँ शक्ति पार्टीका नारायाण ढकाल पनि काठमाडौं १ बाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन । रविन्द्र मिश्रको विवेकशील साझा पार्टीका सांगठनिक संरचना खासै नभएपनि केही मतदाता उनीप्रति आकर्षित छन् । तर लामो समय सांसद र मन्त्री भएका प्रकाशमान सिंह पटक–पटक चुनाव जितेर पार्टी र संसदमा राज गरिरहे पनि विकासको नाममा सिन्को समेत नभाँचेको भन्दै मतदाता रुष्ट छन र विकल्प खोजी रहेका छन ।
याे पनि पढ्नुस प्रचण्डकाे दरिलाे साथ पाएका ओली भन्छन: "मलाई कसैले रोक्न सक्दैन"
याे पनि पढ्नुस 'बादल' भर्सेज 'विप्लव'
ट्याग्स: Anil Sharma, Kathmandu 1, Left Unity